Masuuliyiin Booqtay Dhismaha Kuliyada Farsamada iyo Xirfadaha fiiq. - Cakaara News
Masuuliyiin Booqtay Dhismaha Kuliyada Farsamada iyo Xirfadaha fiiq.
Fiiq(Cakaaranews) talaado, 16ka, February, 2016, Masuuliyiin ay hogaaminayaan gudoomiye ku xigeenka gobolka Nogob mudan Dayib Axmed Nuur iyo gudoomiyaha degmad Fiiq mudane Cabdiqaadir Maxamed Xasan ayaa booqday heerka ay marayaan dhismayaasha kuliyada farsamada iyo xirfadaah ee magaalada fiiq.
Waxayna ahayd ahmiyada booqashada masuuliyiintu in ay soo kormeeraan heerka ay marayso dhismaha kuliyada farsamada iyo xirfadaha ee magaalada fiiq kuwaasi oo u guurgalay heerka ay marayso geedi socodka shaqo ee dhismaah kuliyadu.
Gudoomiye ku xigeenka gobolka Nogob mudane Dayib Axmed Nuur iyo gudoomiye degmada fiiq mudane Cabdiqaadir Maxamed Xasan oo ku lahadlayay goobtaasi dhismaha kuliyada warbaahinta deegaanka ayaa ka warbixiyay ahmiyada ay kuliyadani u leedahay guud ahaanba bulshada gobolka waxayna ka warbixiyeen fursadaha balaadhan ee ay bulshadu ka helidoonto kuliyadan taasi oo ay tilmaameen in ay dhimaheedu hada bilow fiican marayo una socoto shaqadu sidii loogu talagalay.
Odayaasha iyo waxgaradka magaalada fiiq oo ku wehelinayay booqashadan masuuliyiinta ayaa sheegay in ay kuliyadani tahay guulaha lama ilaawaanka ah ee ay xukuumada DDSI u qabatay bulshada ku dhaqan guud ahaanba gobolka nogob gaar ahaana kuwa magaalada fiiq waxayna sheegeen in ay kaalin mug leh ka qaadanayso kobcinta iyo kor u qaadida tayada aqoonta iyo abuuritaanka ilaha shaqo maadaamo oo ay soo saaridoonto xirfadlayaal iyo aqoon yahay badan.
Injineerada iyo hawlwadeenada gacanta ku haya dhismaha mashruuca kuliyadan ayaa sheegay in ay wakhti kooban ku soo gabagabayn doonaan dhismayaasha kuliyadan si ay u bixiyo adeegii loogu talagalay .waxayna ka mid tahay kuliyadani kuliyadihii uu dhawaan dhagax dhigay madaxwayanaha DDSI mudane Cabdi Maxamuuc Cumar.